Semalt Zano: 7 Inobatsira Web Scraping & Content Extraction Tools
. Nhamba yakawanda yezvivako yakatsvaga, uye deta inotorwa zuva rega rega. Mamwe mapurogiramu anoitwa neine zvakakwana software uye zvishandiso, apo mamwe anogona kugadzirwa nemaoko. Purogiramu inotevera haina kungofanana chete asiwo isina mari uye inopa zvakawanda zvivako kuvashandisi vavo.
iMacros inowedzera yevashandisi vewebhu uye ndeimwe yezvinotonhorera zvemapurogiramu uye vasiri mapurogiramu - firmenumzug was ist zu beachten. Iko inokubvumira kutora uye kudzokorora mabasa ewebhu akadai sekuedza, kutora uye kuisa mifananidzo uye kutumira. Izvo zvinoita kuti zvive nyore kwauri kutumira uye kutumira dhidhiyo uchishandisa mahwendefa akasiyana-siyana, maCV uye XML mafaira nezvimwe zvinhu. iMacros inogadzira mabasa akaenzana nehutachiona hwekutsvaga uye kutamba.
PromptCloud inozivikanwa zvikuru nokuda kwayo yakagadzirwa web scraping ; Zvakanaka pamabhizimusi eInternet uye kutanga uye zvinogona kutora matanho ezvinyorwa kwauri mumitauro yakasiyana uye kubva pane zvakasiyana-siyana. Inoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzehutaneti kuitira kuti basa rako riite zvakanaka. Iwe unogona kukanganisa ruzivo kubva pamablogs, mashizha emagariro evanhu, mawebsite ekudzokorora, maforumasi epaIndaneti, uye mahofisi ekufambisa.
WinAutomation ndechechokwadi uye yakarurama automation tool iyo inobatsira vashandi mumabasa akasiyana-siyana. Iyi software inokubatsira kuti upe mafomu, tsvaga nharaunda yako, scrape websites, uye uchengetedze data yakabviswa mufananidzo wemifananidzo uye kunyoresa.Unogonawo kuisa deta yakabudiswa muExpcel mapepa, kubata mabasa akasiyana-siyana, uye kuronga mafaira ako nenzira iri nani WinAutomation inobatsirawo kuendesa email nekushanda kwebasa.
Visual Web Ripper iyi inofanirwa kushandiswa pakutsvaga webhusaiti, kuunganidza deta, uye kubvisa zvigadzirwa zvinobatsira pakarepo.Iyo ndiyo imwe yezvigadzirwa zvine simba zvikuru. mahofisi ezvinyorwa, kukupai mhinduro dzakanakisisa.Zira iri rinowanazve data kubva pamapeji ewebhu, zvichikubatsira kutora mashoko akakwana uye anovandudzwa chete
WebHarvy chirongwa chekuona chekuona zvinongoratidzira zvinonyosiyana web patter yakasiyana ns uye inounganidza dambudziko rinobatsira iwe. Inoparadza mapeji anoverengeka zvakare, kusanganisira mavara, mifananidzo, emaimeri, uye URLs. WebHarvy inokubvumira kudzura data kubva kumawebsite asingatenderi deta yavo ichibviswa.
Darcy Ripper ndiJava-based web crawler uye dhigirii re data. Izvi zvinozivikanwa nokuda kwerinoshandisa-friendly, graphical interface uye inogona kushandiswa kudhinda data yakarongeka zvakanaka mumasekondi. Darcy Ripper inokubvumira kushandura chero hupi URL yezvinyorwa uye kudhinda mafaira mauri mumhando dzakasiyana-siyana.
Ubot Studio ndeimwe yepamusoro uye inotyisa zvikuru yekutsvaga webhu uye mapurogiramu ekubudisa zvinhu. Iyo inouya mushure mekushanda uye kubhadhara zvinyorwa uye iri web-based application. Ubot Studio inotibvumira kuvaka zvikwangwani uye kupedzisa zviito zvakasiyana-siyana zvakadai semigodhi yekutsvaga, kuongorora kwewebhu, nekugadzirisa kwehupenyu. Iwe unogona kuchengetedza mafaira ako mu database yako kana kukanda pa disk yako yakaoma munyaya yemaminitsi.